ပုံစံ ၇ နှင့် ပုံစံ ၁၀၅ တို့၏ မြေအသုံြး ပုပိုင်ခွင့် အကြောင်း (သိထားသင့်လို့ ကျော်မသွားလိုက်ပါနဲ့) – XB Media Myanmar
ပုံစံ (၁၀၅ ) ဆိုသည်မှာ ကျေးရွာ မြေစာရင်းဦးစီဌာနအပိုင် နယ်နိမ်ိတ်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ မြေတို. ရဲ.အကျယ်အဝန်းနဲ. အမျိုးအစားကို ဖော်ပြပေးတဲ့ ပုံစံစာရွက်သာ ဖြစ်ပါတယ် ။ပုံစံ ၁၀၅လက် ထဲရောက်တာနဲကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်လိုရမယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ.။
ဆရာရှင့်… ကျွန်မက အကျိုးဆောင်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ရွာမြေတစ်ကွက်ကို ဝယ်ထား မိ သူ တစ်ဦးပါ ။ ပုံစံ (၁၀၅) ရပြီလို. ပြောလို. ဝယ်လိုက်မိပါတယ် ။သူငယ်ချင်းတွေလည်း ဝယ်ကြ ပါတယ် ။ အဖော်ကောင်းလို.သာ လိုက်ဝယ်တာပါ။
သိပ်နားမလည်တဲ့ အလုပ်လည်း ဖြစ်နေပြီးတော့ အခုဆို သုံးလကျော်လောက် ရှိပြီး။ ပြန်ရော င်းမယ် ဆိုတော့မှ ပါမစ်မြေ ဖြစ်နေတယ် ဆိုလား မသိဘူး။ အမျိုးမျိုး ပြောကြပါတယ်။ကျွန်မ ဝယ်ခါနီးတုန်းကတော့ ရွှေ လို.ပြောကြပြီး ကျွန်မ လက်ထဲ ရောက်မှ အမျိုးမျိုး ပြောခံနေရပါ တယ် ။
အဆောက်အအုံဆောက်မယ် ဆိုတော့လည်း ဆောက်ခွင့်က လွယ်လွယ် မရနိုင်ဘူးတဲ့ ဆရာ။ ဒီတော့ ပုံစံ (၁၀၅) ဆိုတာက ဘာလဲဆရာ ။ ရှင်းပြပါဦး ၊ ကျွန်မ ဒေါ်ခင်လှတင့်ပါ။
ရှင်းရှင်းလေးနဲ. ရှုပ်နေတာကို တစ်သက်စာ မှတ်မိအောင်ကျွန်တော် သိသလောက် ဖြေပေးပါ့ မယ်။ ပုံစံ (၁၀၅) ဆိုတာက “ကျေးရွာမြေစာရင်းဌာန” က ထုတ်ပေးတဲ့ ပုံးစံ တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါ တယ်။အဲဒီ ပုံစံက လယ်ယာမြေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ရွာမြေ ၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျေးရွာမြေ စာရင်း ဦးစီးဌာနအပိုင် နယ်နိမိတ် အတွင်းမှာ ရှိတဲ့မြေတို.ရဲ. အကျယ်အဝန်းနဲ. အမျိုးအစားကို ဖော်ြ ပပေးတဲ့ပုံစံစာရွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံစံ (၁၀၅) လက်ထဲ ရောက်တာနဲ. ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်လို. ရမယ်လို. အထင်လိုက်ပါနဲ.။ အခု ပုံစံ (၁၀၅) အရ ဒေါ်ခင်လှတင့် ဝယ်ထားတဲ့မြေက “လယ်ယာမြေ” ဆိုတာသိပြီေ လ။ လယ်ယာမြေ ဆိုရင်တော့ “လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလတ်မှတ်” ရှိမယ် ဆိုရင် လယ်လုပ်လို. ရမယ်ပေါ့။
အဆောက်အအုံ ဆောက်ဖို.၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခု အခြေတည်ပြီး လုပ်ကိုင်ဖို. ဆိုတာ ကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ. အတွေ.အကြုံအရ ဆိုရင် “သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ” က ခွင့်ပြုမှသာ ရမယ် ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလို ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုရင် “ဂရန်” ကိုပါ လျှောက်ထားပိုင်ခွင့် ရရှိတော့တာပေါ့။ တစ်ချိန်တုန်းက “လယ်ယာမြေ နိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေး အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၉(ယ ခုအခါ – လ/ယ ၃၀ ဖြစ်သည်) နဲ. လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ တူမယ်လို. ကျွန်တာ် ဝါရင့်ပွဲစားမှန်းပြီး ဖြေ လိုက်ပါရစေ။
ဂရန်မြေ နဲ. လယ်ယာမြေ ( ပုံစံ ၇ )
ဒီနေ. လယ်ယာမြေတွေဟာ ဂရန်မြေ သို.မဟုတ် မြေဌားစာချုပ်တို.နဲ. ပုံသဏ္ဌာန် အတော်လေး တူသွားပါပြီး။ စနစ်ကျသွားပြီးလို.ပြောရင် ပိုမှန်ပါတယ်။ဒီတော့ နည်းနည်းပါးပါးလေး လွဲရင် အများစုတူနေတဲ့ ဂရန်မြေအကြောင်းကို နံပါတ်လေးတွေနဲ. ရေးပြမယ် ။
အဲဒါ ဒီနေ. “လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်(ပုံစံ ၇)” ပါပဲ။
1.မြေ၏ ပင်ရင်းပိုင်ရှင်မှာနိုင်ငံတော်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
2. သားစဉ်မြေးဆက် လက်ဝယ်ထားပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
3. မိမိမြေပေါ်မှ အကျိုးအမြတ်တို.ကို ခံစားပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
4. မိမိဆန္ဒအလျောက် ရောင်းချပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
5. ပေါင်နှံပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
6. ဌားရမ်းပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
7. လဲလှယ်ပိုင်ခွင့်လည်း ရှိပါသည်။
8. ပေးကမ်းပိုင်ခွင့်လည်း ရှိပါသည်။
9. အမွေဆက်ခံပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ (စာချုပ် မှတ်ပုံတင်ရပါမည်)
10. အကျိုးတူ ဖက်ဆက်လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
11. နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်ညီလျှင် နိုင်ငံခြား အဖွဲ.အစည်းနှင့်လည်း ပူးပေါင်း လုပ် ကိုင် နိုင်သည်။ အထက်ပါ ၁၁ ချက်လုံးကို “လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်” ရရှိသူတွေ က တစ်ထပ်တည်း ခံစားလို.ရပါသည်။ ဒါပေမဲ့ “လယ်ယာမြေ” မှာလည်း ဒီစည်းကမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်တဲ့ နှုန်းထားအတိုင်း တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကပ်ပြီး မြို.နယ်ဦးစီးဌာ နရုံးမှာ စာချုပ် ချုပ်တိုင်း မှတ်ပုံတင်ရပါမည်။
အမှတ်စဉ် (5) ပေါင်နှံခြင်းကိစ္စမှာတော့ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအရင်းအနှီးအတွက်သာ အစိုးရ အသိအမှတ်ပြုသော ဘဏ်တို.တွင် ပေါင်းနှံရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလယ် ယြာေ မကိုအခြားနည်းသုံးစွဲ၍မရပါ။
လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်(ပုံစံ-၇) မည်သူမဆို လယ်ယာမြေဥပဒေတွင် ပြဌာန်း ထားသည့်အတိုင်း လယ်ယာမြေကိုလုပ်ကိုင်ရမည်။ လယ်ယာမြေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကြီးဌာ န ကစည်းကြပ်သော မြေခွန်နှင့် အခြားအခွန်အခများကို ပေးဆောင်ရမည်။
လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်ခွင့်ကိုရောင်းချခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်းနှင့်ပေးက မ်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သည့်အခါ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်နှင့် စာချုပ် စာ တမ်း မှတ်ပုံတင်ခတို့ကို ပေးဆောင်၍ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးတွင် မှတ်ပုံတင် ရမည်။
တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အမွေဆက်ခံခြင်းဖြင့် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ရရှိသည့်အခါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှု အရင်းအနှီးအတွက်သာ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပေါင်နှံခွင့်ရှိပြီး အစိုးရဘဏ် သို့မဟုတ် အစိုးရကအသိအမှတ်ပြုသော ဘဏ်တွင်သာ ပေါင်နှံရမည်။
သက်ဆိုင်ရာ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့က တရားဝင်ချထားခြင်းမရှိဘဲ ကျူးကျော်လုပ်ကို င်ခြင်း မပြုရ။ လယ်ယာမြေကို ခွင့်ပြုမိန့် မရရှိဘဲ အခြားနည်းသုံးစွဲခြင်းမပြုရ။လယ်ယာမြေကို မူလစိုက်ပျိုးလျက်ရှိသော ရာသီသီးနှံအမျိုးအစားမှ နှစ်ရှည်ပင်အမျိုးအစားသို့ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးခြင်း မပြုရ။ ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ လယ်ယာမြေကို လှပ်ထာြး ခင်း မပြုရ။
လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွားမှုဖြစ်ပေါ်နေသော ကာလအတွင်း လယ် ယာမြေကို ရောင်းချခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေးကမ်းခြင်း မပြုရ။ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် အငြင်းပွားမှု အရှုပ်အရှင်းဖြစ်လာလျှင် ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံ တင်ထားပြီးမှသာ တရားဝင် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။
လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးကိုဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ မည်သည့် နိုင်ငံခြားသား သိုိ့မဟုတ် နိုင်ငံခြားသားပါဝင်သည့် အဖွဲ့အစည်း ကိုမျှ ရောင်းချခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေးကမ်းခြင်း မပြုရ။
Kyi Soe ( IC )